ဒေးဗစ်လေဒီ၏ဖိလစ်ဇင်ဘာဘတ်အားတုန့်ပြန်မှု -“ ကျွန်ုပ်တို့သည်အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောဆွေးနွေးမှုတွင်သိပ္ပံပညာကိုမှီခိုအားထားရမည်” (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သဘာ ၀၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။
အောက်ဖော်ပြပါသည် YBOP ၏ David Ley ၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် blog post“ကျနော်တို့ Porn Debate (2016) တွင်ကောင်းမွန်သောသိပ္ပံအပေါ်ကိုအားကိုးပါဖြစ်ရမည်။Ley ၏ရာထူးသည် Philip Zimbardo ၏တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် "ငါတို့အဘို့အကြှနျုပျတို့ကိုများအတွက်ကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်မကောင်းပါ Porn လား?" (2016).
Ley ၏ခေါင်းစဉ်က“ ကောင်းသောသိပ္ပံပညာ” ကိုကျွန်ုပ်တို့မှီခိုရမည်ဟုဆိုသော်လည်း Ley သည်စာရွက်တစ်ခုတည်းနှင့်သာချိတ်ဆက်ထားသည် (ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုသဘောတရားကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံသည်) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Zimbardo သည်ကိုးကားချက် ၁၄ ခု (လေ့လာမှု ၁၃ ခု၊ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်) နှင့်သူ၏စာအုပ်အသစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်”Man, Interrupted: ဘာဖြစ်လို့လူငယ်တွေကဘာကြောင့်ရုန်းကန်နေကြရတာလဲ၊ ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်သလဲ”. သင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ် Zimbardo, များစွာသောပိုပြီးလေ့လာမှုများကိုးကားနိုင်တယ်။
Update ကို, 2019: ဒါဝိဒ်သည် Ley ယခုယင်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြောင်းသုံးစွဲသူများကစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး xHamster နေဖြင့်လျော်ကြေးငွေခံရနေပါသည်!
ဒါဝိဒ်သည် Ley သာလူပျိုကိုးကားဖို့ Links နှင့်၎င်းသည် Porn စွဲထောက်ပံ့
Ley သည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပံ့ပိုးပေးသည်၊ သို့သော် Ley ၏ post တွင် Zimbardo ၏ post တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုချေပရန်တစ်ခုတည်းသောကိုးကားချက်မရှိပါ။ တကယ်တော့ Ley ၏ဆောင်းပါးသည်ကိုးကားချက်တစ်ခုတည်းနှင့်သာချိတ်ဆက်ထားသည် အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်စာပေ၏မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်, Shane Kraus, Valerie Voon & Marc Potenza ကပြုလုပ်သည်။ Ley ၏ပြောဆိုချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ “ Voon review” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုတည်ရှိခြင်းကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံသည်။ သုံးသပ်ချက်မှကောက်နုတ်ချက်။
CSB [compulsive sex behavior] နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအကြားထပ်တူလက္ခဏာများရှိသည်။ သာမန် neurotransmitter စနစ်များသည် CSB နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးမကြာသေးမီက neuroimaging လေ့လာမှုများသည်တဏှာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောတူညီမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ”
တစ်နည်းဆိုရသော် CSBs ကိုသုတေသနပြုခြင်းသည်သတိထားသိပ္ပံပညာရှင်များသည်နောက်ထပ်အထောက်အထားများကိုတွေ့မြင်လိုလျှင်ပင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုရေးသားသူ (Valerie Voon & Marc Potenza) သည်ထိပ်တန်းစွဲအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်သည်။ အတူတူသူတို့က "ညစ်ညမ်းစွဲ" အပေါ်လေ့လာမှုသုံးခုထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုသည် fMRIs (ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်ခြင်း) ဖြစ်ပြီး၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု) ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Voon နှင့် Potenza တို့ကိုအလွန်အကာအကွယ်ပေးလေ့ရှိသော်လည်းသူတို့၏ ဦး နှောက်လေ့လာမှုသုံးခုသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။1, 2, 3) ။ Ley သည်ဤအရာအားလုံးကိုလျစ်လျူရှုထားပြီးအလေးအနက်သိပ္ပံနည်းကျစာတမ်းများ၏ပုံမှန်အသွင်အပြင်ဖြစ်သောစက္ကူ၏သတိထားမှုအပိုင်းကိုကောက်နုတ်ထားသည်။ ထို့နောက်သူသည်ငါတို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆို၍၊ အချက်အလက်သည်အကန့်အသတ်ရှိရုံသာမဟုတ်ဘဲ၊
"လုံလောက်မှုမရှိဒေတာလက္ခဏာတွေပြွတ်အကောင်းဆုံး CSB (compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ) ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါအဘယျသို့သို့မဟုတ် CSB defining များအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်မည်အကြောင်းအဘယ်အရာကိုခုံနှင့် ပတ်သက်. ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောမလုံလောက်သောဒေတာအမျိုးအစားခွဲခြား, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုရှုပ်ထွေး။ neuroimaging ဒေတာပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့် CSB အကြားတူညီအကြံပြုစဉ်တွင်, ဒေတာသေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစား, တစ်ခုတည်းကိုသာအထီးလိင်ကွဲနမူနာများနှင့် Cross-Section ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားနေကြတယ်။ "
အထက်ပါများကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သုတေသီများပိုမိုဒေတာချင်တယ်။ (သူတို့ကအမြဲတမ်းလုပ်လေ့ရှိသည်။ ) သို့သော် Kraus, Voon နှင့် Potenza တို့ကဆေးစွဲမှုနှင့် CSBs များအတွက်အချက်အလက်များသည် neurobiologically ဆင်တူကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်အလားတူ neurobiological လက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုမျှဝေသည်။ စကားမစပ်, CSBs မူးယစ်ဆေးဝါးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများပါဝင်ပတ်သက်သောပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရောဂါနှင့်အလွန်ဆင်တူဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြရန်ဤပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ကိုးကား ဦး နှောက်လေ့လာမှုအားလုံးနီးပါး ၎င်းသည်သီးခြားပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ။ 2016) Kraus အားဖြင့်တစ်လအစောပိုင်းကထုတ်ဝေ, Voon နှင့် Potenza ကောက်ချက်ချ:
တနည်းအားဖြင့်ပtheိပက္ခသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများအားအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတွင်မဖော်ပြထားပါ။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။ ၎င်းအစားပtheိပက္ခသည်“ ရောဂါလက္ခဏာများစုစည်းခြင်း” သည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (CSB) ကိုအကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ပေးသည့်အရာဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများစုစည်းရန်သဘောတူရန်အခက်အခဲမှာသုတေသီများသည်ခွဲထုတ်ရန်ပျက်ကွက်သောကြောင့်ဖြစ်သည် လိင်စွဲလမ်း မှ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲသူတို့ကို "CSBs" အဖြစ်အတူတူခုန်ချလိုက်သည်။
အပ်ဒိတ်: Valerie Voon နှင့်အခြားစွဲသုတေသီများ၏ရောဂါများ၏ပါဝင်မှုပေါ်မှာဤဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း "မသင်မနေရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" လာမည့် ICD-11 တွင်: အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း (Potenza et al ။, 2017) Excerpts မှ Valerie Voon သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံကြောင်းသင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
Porn အသုံးပြုသူများပေါ်မှာရှိသမျှ 50 အာရုံကြောသိပ္ပံ-အခြေခံပြီးလေ့လာရေး Zimbardo ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုထောကျပံ့; အဘယ်သူမျှမ Ley's ကိုထောက်ပံ့သည်
ဇင်ဘာဘတ်သည် ၁၃ နှစ်တွင်လေ့လာခဲ့စဉ် Ley သည်လေ့လာမှုလုံးဝမရှိခဲ့သည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Zimabardo သည်ကိုးကားချက် ၃၀ ရှိနိုင်သည် နောက်ထပ် CSB ဘာသာရပ်များအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံ -based လေ့လာမှုများ။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Ley ၏ post သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကထုတ်ဝေခဲ့သော porn အသုံးပြုသူများအပေါ်အာရုံကြောသိပ္ပံအခြေပြုလေ့လာမှု (၅၀) ကိုချန်လှပ်ထားသည် (ကို up-to-date ဖြစ်အောင်စာရင်း) ။ ဤမျှဝေး, ရလဒ်များ တိုင်း “ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, neuro-endocrine) သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသဘောတရားကိုထောက်ခံသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများတွင်တွေ့ရသည့်အခြေခံကျသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုအစီရင်ခံခြင်းအပြင်လေ့လာမှုအချို့အရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ libido၊
porn အသုံးပြုသူများအပေါ် 41 လေ့လာမှုများကိုလည်းကျော်နှင့်အတူ align အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု ၃၇၀“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” (ပေ, MRI, fMRI, EEG) ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ချွင်းချက်မပါဘဲဤလေ့လာမှုများပစ္စည်းဥစ္စာစွဲတွင်တွေ့မြင်ကဲ့သို့တူညီသောစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုသတင်းပို့ပါ။ ယင်းမှ neuroscience စာပေ၏ဤမကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ထောက်ပြအဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ, အင်တာနက်စွဲလမ်းတဲ့မျိုးကွဲအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် CSB, အမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်သူတွေအဆိုအရဖြစ်ပါသည်: "အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)။ " ကြည့်ပါ တစ်ဦးရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (2015), တိကျသောဝေဖန်မှုများအပေါ်ကြာသူတို့ကိုတန်ပြန်ကြောင်းကားအညွှန်းကမ်းလှမ်းတဲ့ဇယားကိုထောက်ပံ့ပေးရာ။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အစစ်အမှန်ကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ: ဤစာရင်းပါရှိသည် 25 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
David Ley's Blog Post တွင်တိကျသောတောင်းဆိုချက်များအားဖြေရှင်းခြင်း
ဒေးဗစ်လီ:ဒေါက်တာ Zimbardo ညစ်ညမ်းနေတဲ့အာရုံကြောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြရာအများအပြားလေ့လာမှုများနှင့်ဆောင်းပါးများကိုကိုးကားရန်ပေါ်တတ်၏။ ကံမကောင်းစွာပဲဆက်စပ်နှိုင်းယှဉ် causation ၏ပြဿနာရှိမယ့်, တဖန်, တစ်ခုခုငါအခြေခံသုတေသနအတန်းထဲတွင်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ။ "
တစ်စုံတစ်ယောက်သည်“ အသုံးပြုသောအခါ”အဘယ်သူမျှမ causation သရုပ်ပြခဲ့ပြီးနားထောင်ခြင်းသည်သိပ္ပံပညာရှင်များအားထိုလူ၏သိပ္ပံသို့မဟုတ်သုတေသနအပေါ်အခြေခံနားလည်မှုကိုသံသယဖြစ်စေသည်။ စိတ်ပညာနှင့်ဆေးပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သုတေသနအနည်းငယ်သာတွေ့ရှိရသည် causation တိုက်ရိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်အဆုတ်ကင်ဆာနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်တို့အကြားဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုအားလုံးသည်ဆက်စပ်မှုရှိသော်လည်းအကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုအလငျး၌သုတေသီများများသောအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထံမှ precluded နေကြတယ် စမ်းသပ်ဆဲ ညစ်ညမ်းအချို့ပျက်ဆီးဖြစ်ပေါ်စေသည်သက်သေပြမယ်လို့ထားတဲ့သုတေသနဒီဇိုင်းများ။ ထို့ကြောင့်သူတို့အစားအသုံးပြုရမည် ဆက်စပ်မှု မော်ဒယ်များ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသိပ္ပံနည်းကျဆက်စပ်မှုလေ့လာမှုများကိုမည်သည့်သုတေသနနယ်ပယ်တွင်မဆိုစုဆောင်းမိသောအခါသက်သေအထောက်အထားများကိုလက်တွေ့လေ့လာမှုများမရှိသော်လည်းသီအိုရီတစ်ခုအားသက်သေပြရန်ပြောနိုင်သည့်အချက်တစ်ခုပေါ်လာသည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင်ဆက်စပ်studyရိယာလေ့လာမှုတစ်ခုကလေ့လာမှုinရိယာထဲမှာ "ဆေးလိပ်သောက်သေနတ်" မပေးနိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မျိုးစုံဆက်စပ်မှုလေ့လာမှုရဲ့ပေါင်းဆုံတဲ့အထောက်အထားကိုသက်သေအထောက်အထားတွေပြဖို့အသုံးပြုတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတိုင်းသည်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှုကိုသက်သေပြရန်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်အရာနှစ်ခုအနက်တစ်ခုကိုသင်ပြုလုပ်ရမည်။
အဘယ်သူ၏သက်ရောက်မှုကိုသင်တိုင်းတာရန်လို variable ကိုဖယ်ရှားပစ်။ အထူးသ porn အသုံးပြုသူများကိုရပ်တန့်လျက်, အပြောင်းအလဲများကိုလအတွင်းအကဲဖြတ်ရန် (နှစ်ပေါင်း?) အကြာတွင်ရှိသည်။ ဤသည်လုလင်တို့ကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏နာတာရှည် Non-အော်ဂဲနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (ထိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားပြီထွက် turn) သက်သာစေနိုင်ကြောင်းမှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်အဖြစ်အွန်လိုင်းအလွတ်သဘောဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့အထိလေ့လာမှု ၁၀ ​​ခုကသာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖယ်ရှားပြီးရလဒ်များကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၀ ယောက်စလုံးသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုလေ့လာမှုခုနစ်ခုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုရှိသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ လေ့လာမှု (၇) ခုသည်လူနာများအားနာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုကုသခြင်းအားဖြင့် porn တစ်ခုကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 10 လေ့လာမှုများ:
1) (2015) ဝညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေး: လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ် - ဤလေ့လာမှု သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးစေရန်လျော့နည်းနိုင်စွမ်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများတစ်လအကြာမှာ porn အသုံးပြုသူများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆက်လက် porn အသုံးပြုမှုဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးစေရန်လျော့နည်းနိုင်စွမ်းဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သုတေသီများ2အုပ်စုများသို့ဘာသာရပ်များကိုခှဲဝေ: တစ်ဝက်သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကနေရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့; ဝက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သူဘာသာရပ်များသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုတွေ့ကြုံ: သူတို့ဆန္ဒပြည့်နှောင့်နှေးဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အပေါ်ပိုကောင်းသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါသုတေသီများ said:
2) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့် One ရဲ့ Romantic Partner (2012) ကိုအားနည်းစေကတိသစ္စာ: နောက်ဆုံးမဟုတ်ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကမေတ္တာ - အဆိုပါလေ့လာမှုဘာသာရပ်3ပတ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ ယင်းအုပ်စုနှစ်စုနှိုင်းယှဉ်ပေါ်၌ညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆက်လက်တဲ့သူတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေကိုထက်ကတိကဝတ်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
3) လုလင်တို့သည် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့် - porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (အနိမ့်လိင်စိတ်, fetishes, anorgasmia) နဲ့လူတပေါ်မှာဤဆောင်းပါးအစီရင်ခံစာများတွင်4ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ။ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေ 6-ရက်သတ္တပတ် abstinence များအတွက်လို့ခေါ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ 8 လကြာပြီးတဲ့နောက်လူကိုတိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောင်မြင်သောလိင်နှင့်အော်ဂဇင်နှင့် "ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ခံစားသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စက္ကူကနေကောက်နှုတ်ချက်:
4) အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာပေများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါ ၀ င်သော၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည်ငယ်ရွယ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများမြင့်တက်လာမှုကိုဖော်ပြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုမှတစ်ဆင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်သည် ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်သောအမျိုးသားများနှင့်ပတ်သက်သောဆေးမှတ်တမ်း ၃ ခုကိုဆရာဝန်များကတင်ပြသည်။ အမျိုးသားသုံး ဦး အနက်နှစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမငြိမ်မသက်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ တတိယလူသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
5) အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016) - ပြင်သစ်စိတ်ပညာရှင်၏လက်ရှိဥက္ကpresident္ဌဖြစ်သည် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြားကပြန်နှင့်ထွက်သည့်စိတ္တဇဆိုင်းနေစဉ်, ဒါကြောင့်သူကအများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့် porn-သွေးဆောင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် anorgasmia) ။ အဆိုပါစက္ကူ 35 erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် / သို့မဟုတ် anorgasmia ဖွံ့ဖြိုးပြီးသူအမျိုးသားများနှင့်သူတို့ကိုကူညီအားမိမိကုထုံးချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူမိမိအလက်တွေ့အတွေ့အကြုံကိုကိုဗဟိုပြု။ စာရေးသူကသူ့လူနာအများစုအများအပြား porn စွဲခံနေရအတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖော်ပြသည်။ ပြဿနာတွေ (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနာတာရှည် ED ဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး, ဒါကြောင့် ED တစ်အကြောင်းမရှိအဖြစ်ပေးထားသောဘယ်တော့မှကြောင်းသတိရ) ၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့စိတ္တဇအချက်များ။ ကောက်နှုတ်ချက်:
6) ကရေတိုရေရှည် psychosexual မော်ဒယ်အတွင်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲပါသလဲ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ် (2017) - နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် (anorgasmia) အတွက်အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသပုံနှစ်ခု "ပေါင်းစပ်မှုကိစ္စ" ပေါ်တွင်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ။ "လူနာ B ကို" ဟုအဆိုပါကုထုံးကကုသအတော်ကြာလုလင်တို့သည်ကိုယ်စားပြုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာစက္ကူလူနာ B ကိုရဲ့ "ကိုမကြာခဏကိစ္စဖြစ်သကဲ့သို့", "porn အသုံးပြုမှုကိုခက်ခဲပစ္စည်းသို့ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သော" သော။ ဤသို့ဖော်ပြသည် အဆိုပါစက္ကူ porn-related နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆန်း, နှင့်မြင့်တက်မဟုတ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ ရေးသားသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအပေါ်ပိုပြီးသုတေသနပြုရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ လူနာ B ကိုရဲ့နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိညစ်ညမ်း၏ 10 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အနာကိုငြိမ်းစေခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
7) အခွအေနေ Psychogenic Anejaculation: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2014) - အသေးစိတျ porn-သွေးဆောင် anejaculation တစ်ဦးအမှုထုတ်ဖေါ်။ သူ ejaculate နိုင်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ - ကြိုတင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ခင်ပွန်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကညစ်ညမ်းစေရန်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့သည်။ သူလည်းညစ်ညမ်းဖို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက်လျော့နည်း arousal အဖြစ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်၏သော့အပိုင်းအစသည်သူ၏ anejaculation အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ပျက်ကွက် "Re-လေ့ကျင့်ရေးက" နှင့် psychotherapy ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားကြားဝင်ပျက်ကွက်သည့်အခါကုသ porn မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်မှာပြည့်စုံပိတ်ပင်မှုအကြံပြုသည်။ နောက်ဆုံးတော့ဒီတားမြစ်ချက်သည်သူ၏အသက်တာ၌ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါတနာတစ်နှင့်အတူအောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ကောက်နှုတ်ချက်:
8) ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ကွဲအမျိုးသားများရဲ့အတွေ့အကြုံများ (2019): ရှက်ကြောက်ခြင်း Hidden - ယောက်ျားလေး ၁၅ ယောက်ကိုလူတွေ့မေးမြန်းသည်။ အမျိုးသားတော်တော်များများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၊ သုံးစွဲမှုအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာမှုနှင့်ညစ်ညမ်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းစေသည့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောကောက်နုတ်ချက်များ၊ သူမသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများအတွင်းသူ၏လိင်အင်္ဂါလုပ်ဆောင်မှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခဲ့သည့်မိုက်ကယ်အပါအ ၀ င်၊
တချို့ကယောက်ျားကသူတို့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖြေရှင်းရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ရှာဖွေလျက်အကြောင်းဟောပြောသည်။ အကူအညီ-ရှာကြံမှာထိုကဲ့သို့သောကြိုးစားမှုလူတို့သညျအဘို့အတန်ဖိုးရှိရှိခဲ့များနှင့်အချိန်များတွင်ပင်အရှက်ကွဲခြင်း၏ခံစားချက်များကိုပိုမိုဆိုးရွားဘူး။ မိက္ခေလအဓိကအားလေ့လာမှု-related စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ဖြေရှင်းယန္တရားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောသူတစ်ဦးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှိခြင်းနှင့်သူ၏အထွေထွေ Practitioner ဆရာဝန် (မိသားစုဆရာဝန်) ထံမှအကူအညီရှာသောအခါခဲ့သည်:
9) လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2019) - Abstract:
အဆိုပါဒေတာများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူပြီးမှ, ငါအင်တာဗျူးအပေါငျးတို့သအတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီဇာတ်ကြောင်းအောက်ပါအချို့ပုံစံများနှင့်ထပ်တလဲလဲ themes များသတိပြုမိပါပွီ။ ဤရွေ့ကားနေသောခေါင်းစဉ်: နိဒါန်း။ တစ်ခုမှာပထမဦးဆုံးအများအားဖြင့်အပျိုဖော်ဝင်စမှီ, ညစ်ညမ်းစေရန်မိတ်ဆက်သည်။ တစ်ဦးအလေ့အထတည်ဆောက်ခြင်း။ တဦးတည်းပုံမှန်ညစ်ညမ်းလောင်မှစတင်ခဲ့သည်။ စက်လှေကား။ တစ်ခုမှာယခင်ညစ်ညမ်းနည်း "အစွန်းရောက်" ပုံစံများမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တူညီတဲ့သက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, ညစ်ညမ်း, အကြောင်းအရာ-ပညာရှိပိုပြီး "အစွန်းရောက်" ပုံစံများကိုမှပြန်သွားလေ၏။ သဘောပေါက်။ တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခံရဖို့ယုံကြည်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြဿနာများသတိပွုမိ။ "Re-Boot တက်" လုပ်ငန်းစဉ်ကို။ တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိသို့မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာနိသင်ပြန်လည်နိုင်ရန်အတွက်လုံးဝကပပျောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှအဆိုပါဒေတာကိုအထက်ပါအကြမ်းဖျင်းပေါ်အခြေခံပြီးတင်ပြနေကြပါတယ်။
10) Abstinence Preferences ကို (2016) ထင်သလောက်ဘယ်လို [ပဏာမရလဒ်တွေကို] - ဆောင်းပါးကနေကောက်နုတ်ထားပါတယ်:
RESPONSE: Ley သည်အကိုးအကားမပေးသည့်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ လေ့လာမှုပြီးနောက်လေ့လာမှုကဒီမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲ Ley meme ငြင်းဆိုသည်။
Ley ၏“ ပိုမိုမြင့်မားသော libido” ပြောဆိုချက်သည်သူ၏ဘလော့ဂ်တင်ထားသည့်ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်“ ပေါ်လာသည်”သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်။ Ley blog post သည် YBOP ၏နောက်ကွယ်သိပ္ပံပညာနှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစား၎င်းသည် EEG လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူရေးသားသူသည်အဓိကဖြစ်သည် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နီကိုးလ် Prause: (သံမဏိ et al။ 2013) ။ Ley နှင့် Prause နှစ် ဦး စလုံးသည်လေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များအရ porn / sex စွဲလမ်းမှုသည်မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Ley နှင့် Prause နေဖြင့်တောင်းဆိုမှုများဆန့်ကျင်, စတီး et al ။ အပြာနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုမှုသည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်း (သို့သော်အပြာမှအသာမှေးမှိန်လိုသောဆန္ဒမရှိခြင်း) နှင့်ဆက်စပ်မှုသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အကြောင်းအရင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေတဲ့၊ ညစ်ညမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြသူတွေကတကယ့်လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ညစ်တာကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဘဲဖြစ်မှာပါ။ ၎င်းသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” ၏လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။
အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ coupled porn ပိုမို cue reactivity ကိုပု aligns 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုလေ့လာမှု porn စွဲပေါ်မှာ။ ၏အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များ စတီး et al။ , 2013 သည်၎င်း၏နိဂုံးချုပ်သို့မဟုတ် Ley ၏ blog post အခိုင်အမာမထောက်ခံပါ။ နောက်ဆက်တွဲသက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများရှစ်ကပြောသည် သံမဏိ et al။ တွေ့ရှိချက်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေသောပုံစံကိုထောက်ခံသည် (“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒ” အယူအဆနှင့်ဆန့်ကျင်သည်): ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013
2015 ခုနှစ်, နီကိုးလ် Prause ထုတ်ဝေမယ့် ဒုတိယ EEG လေ့လာမှု, ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ "porn စွဲ" ၌ (နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှအကျဉ်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူ) နည်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ရာ (သံမဏိ et al။ , 2013 ဒီညစ်ညမ်းစွဲအတွက်သညျ့လျှော့ဆန္ဒ၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်) မျှထိန်းချုပ်ဘာသာရပ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူဿုံ align Kühn & Gallinat (၂၀၁၄), vanilla ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းကျင့်သုံးသူများ” ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအလွန်မြင့်မားစွာထားခြင်း မှလွဲ၍ စွဲလမ်းသူမဟုတ်သူများအားလှုံ့ဆော်ရန်လိုအပ်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် Prause ၏ဒုတိယ EEG လေ့လာမှု၏ရလဒ်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနည်းပါးသည်။ သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းကိုးလုံးကသဘောတူသည် Prause et al။ , 2015 အမှန်တကယ်မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization / လေ့တွေ့ရှိခဲ့: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
တကယ်တော့, Prause ဒီမကြာသေးမီတွင်ဖော်ပြထား Quora post ကို သူမသည်လိင်စွဲလမ်းသူများ၌မြင့်မားသောလိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုများရှိသည်ဟုမယုံကြည်တော့ကြောင်း -
10) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ် -This EEG လေ့လာမှုမွှမ်းတင်ခဲ့ပါသည် မီဒီယာ porn / လိင်စွဲလမ်း၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ မရဒါ. သံမဏိ et al။ 2013 အမှန်တကယ်ဆင်း-ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံး၏တည်ရှိမှုဖို့ထောက်ခံမှုချေးငှားသည်။ ဘယ်လိုနည်းဖြင့်? အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်အစီရင်ခံတင်ပြ (ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုး) ဘာသာရပ်များခေတ္တညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါ။ လေ့လာရေးတသမတ်တည်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးမွငျ့မား P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြသပါ။
အတူတူအဲဒီနှစျခု သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များအရ (ရုပ်ပုံများကို) ကြည့်ခြင်းအတွက် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားသော်လည်းသဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကို (လူနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ကိုတုန့်ပြန်မှုနည်းသည်။ ဒါကစွဲလမ်းမှု၏အမာခံများဖြစ်သော sensitization & desensitization ။ သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်း ၈ ခုသည်အမှန်တရားကိုရှင်းပြသည်။ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။, 2013 ဒီကိုလည်းတွေ့မြင် ကျယ်ပြန့် YBOP ဝေဖန်မှု။
11) ပြImagesနာရှိသောသုံးစွဲသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများ“ Porn စွဲ” နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသောထိန်းချုပ်မှုများ (၂၀၁၅) ကနေ -a ဒုတိယ EEG လေ့လာမှု နီကိုးလ် Prause ရဲ့အဖွဲ့။ ဒီလေ့လာမှုကမှအ 2013 ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်လျှင် သံမဏိ et al။ , 2013 (သေးပါကအထက်အမည်ရှိတူညီသောအတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရ) အနေနဲ့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်အုပ်စု။ ရလဒ်: ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် "သူတို့ porn ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရတစ်ဦးချင်းစီ" vanilla ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ခဲစာရေးသူက "ဒီရလဒ်တွေကိုမလုပ်ပဲporn စွဲ debunk။" ဘာ တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင် သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်?
Prause (သူမ၏ EEG ဖတ် "cue-reactivity ကို" အကဲဖြတ်ကြောင်းတရားကိုဟောပြောာင်း), အစားလေ့ထက်။ Prause မှန်ကန်သောခဲ့ကြသည်ရင်တောင်သူမအဆင်ပြေသူမ၏ "မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု" အခိုင်အမာအတွက် gaping ပေါက်လျစ်လျူရှု: ရင်တောင် Prause et al ။ 2015 မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်လျော့နည်း cue-reactivity ကိုတွေ့ရှိခဲ့ဖူး, 25 သည်အခြားအာရုံကြောလေ့လာမှုများ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် cue-reactivity ကိုသို့မဟုတ်မတရားသော (ထိခိုက်လွယ်) သတင်းပေးပို့ကြပြီ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25။ သိပ္ပံလေးနက်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုအားဖြင့်မလွယ်ကူသည့်တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုနှင့်အတူမသွားဘူး, သိပ္ပံသင်မဟုတ်လျှင် (သက်သေအထောက်အထား၏သဘောအရဆိုလျှင်အတူသွား အစီအစဉ်-မောင်းနှင်နေကြသည်).
ဒေးဗစ်လီ:ဤသဘောသည်ဤလေ့လာမှုများရှာတွေ့ထားတဲ့အာရုံကြောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူပတျသကျကြောင်းအများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်အဲဒီအာရုံကြောဝိသေသလက္ခဏာများတကယ်တော့အကြောင်းရင်းမဟုတ်, အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ။ "
RESPONSE: သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောဥပမာတစ်ခုဖျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ, Ley ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဟုဆိုကာဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ 50 လေ့လာမှုများ စွဲ porn အသုံးမပြုခင်တည်ရှိခဲ့ကြရပေမည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့နှစ်ခုအဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများလေ့လာမှုများအားဖြင့်သတင်းပေးပို့နိုင် သာ နာတာရှည်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုး:
အသိ: နာတာရှည်အသုံးပြုခြင်းသည်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲစေပြီး၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအတွေးများသို့မဟုတ်အကြံအစည်များကြောင့်ဆုလာဘ် circuit ကို buzz ဖြစ်စေသည်။ ဤသည် Pavlovian မှတ်ဉာဏ်သည်စွဲဘဝ၏အခြားလှုပ်ရှားမှုများထက်စွဲစွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်စေသည့်ပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအားအသိမှတ်ပြုခြင်းသတင်းပို့ခြင်းလေ့လာမှုများ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.)
Desensitization: နာတာရှည်အသုံးပြုမှုဖြစ်လာသည့်တစ်ဦးချင်းစီမှဦးဆောင် အပျော်အပါးမှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့မကြာခဏတူညီတဲ့ဘက်ဇ်အောင်မြင်ရန်ကွီးဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းအဖြစ်တငျပွထားတဲ့။ ဤသည်အဖြစ်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် သည်းခံနေခြင်း သာနာတာရှည်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုကိုအစီရင်ခံသည့်လေ့လာချက်များ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.)
Ley ကဒီအာရုံကြောဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုအမည်မဖော်နိုင်ကြောင်းအတော်လေးပြောနေပါတယ်။ အဖြစ်မှန် - စွဲလမ်းမှုယန္တရားကိုနှစ် ၆၀ နီးပါးလေ့လာခဲ့သည်။ စွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်တိကျတဲ့ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများမှဆင်းသက်လာသည် ဆယ်လူလာ, ပရိုတိန်းနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်။ ဤရွေ့ကား ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုအတူတကွအဖြစ်လူသိများအပြုအမူများနှင့်အတူထပ်ခါထပ်ခါဆက်စပ်ပါပြီ "စွဲ phenotype ။ " စွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများကိုတိရိစ္ဆာန်များမှရိုးရိုးလေးသာသွေးဆောင်နိုင်သည် တစ်ခုတည်းပရိုတိန်းတိုးမြှင့် ဆုစင်တာ (Deltafosb) အတွင်း။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Dr. Ley မှမသိသေးသည့်တိုင်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများထက်စွဲလမ်းမှု၏ဇီဝဗေဒအကြောင်းကိုလူသိများသည်။
ရိုးရှင်းများနှင့်အလွန်ကျယ်ပြန့်ဝေါဟာရများအတွက်အဓိကအခြေခံအကျဆုံးဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုနေသောခေါင်းစဉ်: 1) အသိ, 2) Desensitization, 3) Hypofrontality /အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် 4) အလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး4porn အသုံးပြုသူများအပေါ် 44 မှ neuroscience လေ့လာမှုများအကြားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီ
ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ / လိင်စွဲလမ်းသူများအတွက်အထိခိုက်မခံခြင်း (cue-reactivity & cravings) သတင်းပို့ခြင်းလေ့လာမှုများ - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် functioning (hypofrontality) သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲများတွင်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကဒေါက်တာ Ley ကအမြဲတမ်းစွဲချက်တင်နေပုံရတယ်၊ ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကိုသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အပံ့မရှိဘူး၊ လေ့လာမှု ၅၀ ကလိင် / လိင်စွဲလမ်းမှုအတွက်အထောက်အပံ့ပေးရုံသာမကကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းစွဲပညာရှင်များလည်းပါ ၀ င်သည်။ သူတည်ဆောက်ခဲ့သောပူဖောင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွင်သိပ္ပံပညာနှင့်အလွန်အလှမ်းဝေးနေသည်။
ဒေးဗစ်လီ:Grubbs လည်း "porn စှဲလမျးသူ" ၏ဝိသေသလက္ခဏာကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်မုန်းများနှင့်ကြောက်ရွံ့တစ်ဦးချင်းပြောနေအသုံးပြုပုံထိခိုက်မှုနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲဖန်တီးသော iatrogenic အယူအဆ, ကြောင်းမကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့"
RESPONSE: အဘယ်အရာကိုမျှအမှန်တရားကနေဝေးကွာနိုင်ဘူး။ Grubbs ၏လေ့လာမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း “ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုသိမြင်စွဲလမ်းမှု - တစ်ချိန်တည်းနှင့်အချိန်နှင့်အမျှဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ခြင်း” ၏ဝေဖန်မှု (၂၀၁၅) ။
Ley's နှင့် Grubbs လေ့လာချက်၏စွပ်စွဲချက်များသည်မှားယွင်းသောနေရာနှစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Grubbs ၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှု (CPUI) သည်အမှန်တကယ်စွဲခြင်းထက်“ ရိပ်မိသော porn စွဲလမ်းမှု” ကိုအကဲဖြတ်သည်။ ကမ။ Grubbs et al။ Grubbs ၏ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသောညစ်ညမ်းမှုစွဲချက်ကို“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” စမ်းသပ်မှုဟုပြန်လည်အမှတ်အသားပြုသည်။ သို့သော်ဤဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းစာပေအသုံးပြုမှုစာရင်း (CPUI) မေးခွန်းလွှာသည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်များနှင့်ဆင်တူသည် စှဲမွဲမှု မေးခွန်းလွှာ အခြားစွဲခြင်းစမ်းသပ်မှုများနည်းတူ CPUI သည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောအပြုအမူများနှင့်လက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်သည်။ အသုံးပြုမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ သုံးစွဲရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းမှု၊ သုံးစွဲရန်တွန်းအား၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများ၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူပိုမိုရှုပ်ထွေး။ အမှန်မှာ၊ မေးခွန်း ၉ ခုအနက် ၁ ခုသာလျှင်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ကိုအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြသည်။ သို့သော်မေးခွန်း ၉ ခုလုံးအတွက်လူတစ် ဦး ၏စုစုပေါင်းရမှတ်သည်စွဲလမ်းမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုမဟုတ်ဘဲ“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူကြောင်းပြောထားသည်။ အလွန်လှည့်ဖြားအလွန်လိမ္မာပါးနပ်နှင့်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမရှိဘဲ။
Grubbs porn အသုံးပြုမှု CPUI ရမှတ်များနှင့်နာရီအကြားအနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း။ Ley ၏ပြောဆိုချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ Grubbs သည်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့် CPUI အကြားတော်တော်လေးဆက်စပ်မှုရှိသည်။ မှစ။ လေ့လာမှု ၆
"ထို့အပြင် နာရီအတွင်းပျှမ်းမျှနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု သိသိသာသာကြီးနှင့်အပြုသဘောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အမျက်ဒေါသနှင့်ဆက်စပ်အဖြစ်နှင့်အတူ ရိပ်မိစွဲ။ "
စာနယ်ဇင်းများကိုရပ်လိုက်ပါ ဤကောက်နုတ်ချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” နှင့်လုံးဝမဆက်စပ်ပါဟုဆိုသောခေါင်းစီးများအားလုံးနှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်သည်။ တနည်းကား၊ “ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုသင်တွေ့သည့်အခါ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုဖြစ်သော CPUI ရှိဘာသာရပ်များ၏စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုအမှန်တကယ်ဖော်ပြသည်။ ဤအချက်ကိုအမှန်တကယ်ရယူပါ။ Grubbs ၏လေ့လာမှုသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ကိုအကဲဖြတ်မထားပါ။ ဤဝေဖန်မှုတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအများအပြားရှိပြီးဆောင်းပါးများနှင့် Grubbs ၏လေ့လာမှုများမှထွက်ပေါ်လာသောအဆိုပြုချက်များကိုရှင်းလင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယောရှုဂရော့ဘ်စ်သည်သူ၏“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သုတေသနပြုချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများအပေါ်တွင်သိုးမွှေးထိုးနေသလား။ (2016) ။
အပ်ဒိတ်: ယောရှုသည် Grubbs ဘာသာရေးလူတွေကိုသူတို့က porn စွဲဖြစ်ကြသည်ယုံကြည်ဖို့ပိုများပါတယ်သောစကားအမှတ် (ထို Grubbs လေ့လာမှုများအကဲဖြတ်ဘယ်တော့မှသော်လည်း "စွဲခံနေရ porn အတွက်ယုံကြည်ချက်") စမ်းသပ်လေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ နှငျ့ရငျဆိုငျ စဉ်းစားဟန်သံသယ မိမိအ CPUI-9 တူရိယာအမှန်ပင်စစ်မှန်သောပြဿနာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ "ကိုရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ" ကိုခွဲခြားနိုင်သည်သူ၏ယူဆချက်ကို၎င်း, အခြေအမြစ်မရှိတောင်းဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအကြောင်းကြောင်းဒေါက်တာ Grubbs သိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ်ညာဘက်အရာကိုပြု၏။ သူကတိုက်ရိုက်ကသူ၏ယူဆချက် / ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့လေ့လာမှုတစ်ခု pre-မှတ်ပုံတင်။ pre-မှတ်ပုံတင်ရေးဒေတာစုဆောင်းပြီးနောက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယူဆချက်ကနေသုတေသီများကာကွယ်အသံသိပ္ပံနည်းကျအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအချိန်, သို့သော်, သူသည်မိမိအားမကိုးခဲ့ဘူး CPUI-9 တူရိယာ။ (အဆိုပါ CPUI-9 မေးခွန်းများကို "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ / အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲ"3ပါဝင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းတူရိယာထဲမှာမတှေ့ - နှင့်ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအဘာသာရပ်များစံစွဲ-အကဲဖြတ်တူရိယာအပေါ်လုပ်ပေးထက်နိမ့်ဂိုးသွင်းဖို့ပိုမိုမြင့်မားခြင်းနှင့် Non-ဘာသာရေးအသုံးပြုသူများကဂိုးသွင်းဖို့ဖြစ်စေတဲ့၎င်း၏ရလာဒ်များ skew) အဲဒီအစား, အ Grubbs အဖွဲ့ "(porn အသုံးပြုသူ2တိုက်ရိုက် Yes / No မေးခွန်းများကိုမေး၏။ငါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်။ ""ကျွန်မအနေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်မည်။ ") နှင့်တစ်ဦးအပေါ်ရမှတ်များနှင့်အတူရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်" ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ "မေးခွန်းလွှာ။
သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးဒေါက်တာ Grubbs နှင့်သူ၏တွဲဖက်စာရေးဆရာကြောင်းအကြံပေး,
ဒေးဗစ်လီ:ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သော ED သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းတစ်စောင်မျှထုတ်ဝေခြင်းမရှိပါ။"
RESPONSE: လုံးဝမှားယွင်းသော။ ထိုသို့ရုံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ လေ့လာမှုတော်တော်များများသည်လူငယ်များနှင့် porn တွင်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း၊ anorgamsia၊ လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းခြင်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှုနောက်ကျခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များအား ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဖြည့်စွက်ကာ ဒီစာမျက်နှာ အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ 100 ကျွမ်းကျင်သူများက (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည်။
porn အသုံးပြုမှု / လိင်စွဲလမ်းနှင့်ပညာရေး, anorgamsia နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation အကြားလင့်များသတင်းပို့လေ့လာရေး။
အောက်ကလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 130 ကျွမ်းကျင်သူများကကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပါရှိသည် အသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသကြသူ (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ။ ပထမဦးဆုံးအ7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေအဖြစ်:
ဒေးဗစ် LEY: သို့သော်ဒေါက်တာ Zimbardo erectile စွမ်းဆောင်ရည်ဆေးများ၏တီထွင်မှုနှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောကြီးမားတဲ့လူမှုရေးအပြောင်းအလဲများကိုအသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်စဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်ခြင်း, အရာသိသိသာသာသက်ဆိုင်တဲ့အရှက်ကွဲခြင်းကိုလျှော့ချအသုံးပြုပုံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုထုတ်ဖော်ရန်စိတ်အားထက်သန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
RESPONSE: အနိမ့်လိင်စိတ်: 2010 ကတည်းကငယ်ရွယ်အထီးလိင်အကဲဖြတ်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏သမိုင်းဝင်အဆင့်အသစ်တစ်ခုဘေး၏တုန်လှုပ်နှုန်းထားများသတင်းပို့ပါ။ ဒီ Lay ဆောင်းပါးထဲမှာမှတ်တမ်းတင် နှင့်7အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များပါဝင်သောဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူအတွက် - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016)
တစ်ဖန်, Viagra (1997) ၏မိတ်ဆက်ယောက်ျားမှဦးဆောင်နောက်ဆုံးတော့အမှန်တရားပြောပြသူ၏ပြောဆိုချက်ကိုမပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှုလည်းမရှိ, အဖြစ် Ley ဘာမျှမကိုးကား လေ့လာမှုများအတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ် (13 နှစ်ကြာပြီးနောက်) ။ ဤရွေ့ကား ED ဆေးကိုတောင်းဆိုဖို့ကသူတို့ဆရာဝန်တွေကလာရောက်လည်ပတ်ယောက်ျားများ၏နှုန်းထားများမရှိကြပေ။ အဆိုပါပညာရေးနှုန်းထားများရည်ညွှန်းကိုးကား သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများမှသာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏လူဦးရေမှာကျယ်ပြန့်နှုန်းအပေါ် (များသောအားဖြင့်အမည်မသိ) ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, ကို 'Viagra အယူအဆ' '1948 နှင့် 2010 အကြားထုတ်ဝေတိုင်းတစ်ခုတည်းလေ့လာမှုမှာ, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်နိုင်ငံများရှိလူငယ်အထီးသင်တန်းသားများကိုတသမတ်တည်းသူတို့ရဲ့ erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာအကြောင်းကိုလိမ်ညာကြွေးကြော်နေပါတယ်။ ရုတ်တရက်, 2010 အားလုံးကိုလုလင် (ထိုအခါလူအပေါင်းတို့နှင့် သာ လုလင်) သူတို့ရဲ့ ED ပြproblemsနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားကိုစပြောခဲ့တယ်။ ဒါစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတယ် Ley ၏ပြောဆိုချက်သည် Aspirin ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းကအသက်အုပ်စုတစ်စုတည်းတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၁၀၀၀% တိုးစေသည်ဟုအမည်မသိလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့်တူ၏။ Viagra ကို ED ဟုဆိုသည်ဟူသောအချက်ကိုငြင်းဆိုသည့်အချက်များ။
2) အဆိုပါပညာရေးအတွက်အဆမြင့်တက်ခြင်းနှင့်နိမ့်လိင်စိတ်နှုန်းထားများဖြစ်ပွားခဲ့သည် သာ 40 နှစ်အောက်ယောက်ျားများတွင်ဤသည်တစ် ဦး တည်း Ley ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုငြင်းဆိုသည်။
3) ဒီတစ်ချိန်တည်းကာလအတွင်းအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (နှင့်အခက်အခဲများလွန်း orgasming အတွက်တိုး၏သက်သေသာဓက) တွင်တစ်ဦး concomitant တိုးရှိ၏။ 1992 ကနေအကြီးဆုံးအမေရိကန်လေ့လာမှု5အောက်မှာယောက်ျား၏ 40% အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
6) သာမန်အဓိပ္ပာယ် - ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကလူငယ်တစ် ဦး ထက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကြုံတွေ့ရသောအခါယနေ့လူငယ်တစ် ဦး သည် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကြုံတွေ့ရသောအခါရှက်ရွံ့ခြင်း၊ ရှက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟူသောအထောက်အထားလုံးဝမရှိပါ (ထပ်မံ၍ အချက်အလက်အားလုံးသည်အမည်မသိသောမေးခွန်းလွှာများကိုလေ့လာမှုများမှရရှိသောကြောင့်အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ) ။
ဒေးဗစ် LEY: အမှန်စင်စစ်မျိုးစုံ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးများကိုယခု PIED အဘို့အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိရသည့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြပေမယ့်အစား, ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် concomitant တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, နှောင့်နှေးအော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်ဖွယ်ရှိသည်.
ပထမပိုငျးတုံ့ပြန်: PIED အတွက်အထောက်အထားမရှိသောသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါးများစွာကိုယခုထုတ်ဝေသည်"
ပထမ ဦး စွာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည် porn-induced (PIED) ဟုတ်မဟုတ်ကိုအတည်ပြုရန်နည်းလမ်းတစ်မျိုးတည်းသာရှိသည်။ porn ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားပြီးဝေဒနာသည်သည်ပုံမှန် erectile လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြန်ဖြစ်သလားဆိုသည်ကိုကြည့်ပါ။ လေ့လာမှုသုံးခုကဤသို့ပြုခဲ့ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းစေသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ 28 လေ့လာမှုများ၏ဤစာရင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn အသုံးပြုမှု / လိင်စွဲချိတ်ဆက် (ပထမ5သရုပ်ပြ causation သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေကဲ့သို့) ။
Ley ရည်ညွှန်းနိုင်သည့်“ ဆောင်းပါးများစွာ” သည်အမှန်တကယ်တွင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပမာဏအကြားဆက်နွယ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုဆိုသောစာတမ်းနှစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးစာတမ်းဖြစ်သော Prause & Pfaus 2015 သည်ပျောက်ဆုံးနေသောအချက်အလက်များ၊ ထောက်ခံမှုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများ၊ နည်းစနစ်ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်အချက်အလက်များတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်သောထုတ်ပြန်ချက်များကြောင့်၎င်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုစွပ်စွဲခံရသောကြောင့်ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခံခဲ့ရသည် အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် တရားဝင်အနေနဲ့ပညာရပ်ဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာ critiqued တစ်သုတေသီနှင့်မျိုးဆက်ပွားဆေးပညာဆရာဝန်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤ ဝေဖန်မှုကို တင်. စက္ကူအတွက် ပို. ပင်ပေါက်တွေဖျောထုတျ။
တစ်ဦးကစက္ကန့်စက္ကူ (Landripet & Stulhofer) အသက် ၄၀ မပြည့်သေးသောအမျိုးသားများတွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှုန်းသည်အလွန်မြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (လေ့လာမှုသည်အပြည့်အ ၀ မဟုတ်သော်လည်း“ အတိုချုပ်ဆက်သွယ်မှု”) ။ Ley ၏တောင်းဆိုမှုများနှင့်ဆန့်ကျင်သည် လေ့လာမှုအမှန်တကယ် ED နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားအနည်းငယ်ဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီအမျိုးသား ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသာညစ်ညမ်းမှုကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြပြီးနော်ဝေလူမျိုး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကမူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ပေါ်တူဂီလူမျိုးတွေမှာရှိတယ် ဝေးလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု နော်ဝေထက်။
စာရေးဆရာနှစ် ဦး နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအပိုင်းဖြစ်သည်။ Landripet & Stulhofer ၏“ ဆက်သွယ်မှုအကျဉ်း” သည်သူတို့တင်ပြသောသိသာသောဆက်စပ်မှုသုံးခုကိုချန်လှပ်ထားသည် ဥရောပညီလာခံ (သူတို့ရဲ့စိတ္တဇထံမှကောက်နှုတ်ချက်):
တိုးမြှင့် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့် သိသိသာသာနဲ့ဆက်စပ်မိန်းမတကာတို့ထက်ပူးပေါင်းလိင်နှင့်ပိုပြီးပျံ့နှံ့နေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အကျိုးစီးပွားယုတ်လျော့
သူတို့လညျးဒိ porn သုတေသီလျစ်လျူရှုအဖြစ်စာရေးဆရာများ, သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိ၌ဤတွေ့ရှိချက်ကိုချွတ်မှုတ်ကလျစ်လျူရှု Gert Martin Hald ၏တရားဝင်မှတ်ချက် : သူကပြောပါတယ်ထားတဲ့အတွက်လေ့လာမှုနှင့် ပတ်သက်.
Gert Martin Hald ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှတ်ချက်များ ပြီးခဲ့သည့် 12 လအတွင်းတစ်ပတ်ကိုရုံကြိမ်နှုန်းထက်ပိုမို variable တွေကို (ပြုပြီ, မော်ဒ) အကဲဖြတ်ရန်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုအလေးပေး:
တတိယအချက်အနေဖြင့်လေ့လာမှုသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသူသို့မဟုတ်လေ့လာထားသည့်ဆက်နွယ်မှု၏ဖျန်ဖြေသူများကိုမဖော်ပြထားပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနတွင်လေ့လာမှုပြုခဲ့သည့် (ဥပမာ၊ အလယ်အလတ်) ၏ဆက်စပ်မှုပမာဏ (သို့) ဘက်လိုက်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်အချက်များ (ဥပမာ - ဖျန်ဖြေသူများ) ကိုအာရုံစူးစိုက်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုအနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ယင်းတို့ကိုပါ ၀ င်ခြင်းမှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်“ ပြီးခဲ့သည့်လကအသုံးပြုသောနာရီများ” ကဲ့သို့သောကန့်သတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်အရာကိုမျှဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုနှစ်မျိုးလုံးအတွက်လေ့လာမှုများတွင်၎င်းကိုတည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်သည်။1, 2, 3) နှင့်အင်တာနက် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစွဲထိုလက္ခဏာများသည်“ နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်း” နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ လက်ရှိနာရီကိုသာအသုံးပြုမည့်အစား၊ ပေါင်းစပ်ထားသော variable များသည် porn-induced ED နှင့်အကောင်းဆုံးဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် -
porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းသုတေသနဖို့ပိုကောင်းလမ်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားရလဒ်ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောသုတေသနထုတ်ဖော်ပြသ causation အစားအနက်ကိုဖွင့်လှစ်ဆက်စပ်မှု၏။ အကြှနျုပျ၏ site ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ် အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့သူတထောင်အနည်းငယ်ယောက်ျား။
SUMMARY: ခိုင်လုံသောလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ED နှင့် porn အသုံးပြုမှုပမာဏဆက်စပ်မှုရှိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ Ley ၏ပြောဆိုချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ဤလေ့လာမှုသည် ED နှင့် porn အသုံးပြုမှုအကြားအနည်းဆုံးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်စပ်မှုတစ်ခုတင်ပြထားသည်။ ဒီတစ်ခုတည်း "အတိုချုပ်ဆက်သွယ်ရေး" offsetting ကျနော်တို့ရှိသည် 25 လေ့လာမှုများသတင်းပို့ လုလင်တို့သည်ထဲမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပညာရေး, anorgasmia နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation အကြားဆက်ဆံရေး။
ဒေးဗစ် LEY: PIED အတွက်အထောက်အထားမရှိသောသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဆောင်းပါးမျိုးစုံကိုယခုတွင်ထုတ်ဝေသည်။ ဒါပေမယ့်အစား, ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် concomitant တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, နှောင့်နှေးအော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်ဖွယ်ရှိသည်။ "
ဒုတိယအပိုင်းသို့တုံ့ပြန်ပါ -“ဒါပေမယ့်အစား, ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့သောညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် concomitant တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, နှောင့်နှေးအော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်ဖွယ်ရှိသည်။ "
ဘယ်လောက်ထူးဆန်း Ley နှောင့်နှေးအော်ဂဇင်က erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ "ဆန့်ကျင်ဘက်" ဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုသည်ခံရဖို့ပုံရသည်။ Ley မှ ဦး ထုပ်။ ၎င်းသည်သူရေးသားခဲ့သမျှတွင်အမြင့်ဆုံးထိပ်ဆုံးနေရာ၌ရှိသည်။ Ley သည်ဤ ၂၀၁၅ လေ့လာမှု၏ရလဒ်များမှာလိင်စိတ်မမှန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမျိုးသားများအတွက်ဖြစ်သည်။115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ"။
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုသူတို့ porn မှတစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီသို့မဟုတ်တစ်ပတ်ကိုထက်ပို 27 နာရီ masturbated အဓိပ္ပာယ် "ကိုရှောင်ကြဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ," အဖြစ်7ယောက်ျားခွဲခြား။ အဆိုပါ compulsive porn အသုံးပြုသူ 71% 33% အစီရင်ခံနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများကိုသတင်းပို့.
ကျန်ရှိနေသေးသောယောက်ျား၏ 38% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘယ်အရာကိုကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသနည်း ဒီလေ့လာမှုကမပြောသေးပါဘူး။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာနှစ်ခုမှာ ED နှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သငျသညျသင်္ချာလုပ်ပါ။
အဖြစ်မှန်မှာတော့ porn-သွေးဆောင်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်မကြာခဏဖြစ်ပါသည် ရှေ့ပြေး porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရန်။ ED ကဲ့သို့ပင်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ယောက်ျားပြန်လည်နာလန်ထူ၏ search အတွက်ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ရွေးချယ်မူလတန်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာကို ညစ်ညမ်းသွေးဆောင်ခြင်းမှပြန်လည်ထူထောင်လာကြသောအမျိုးသားများကပုံပြင်များစွာပါ ၀ င်သည်။ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်တူညီသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများမှပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ဆုံးတွင် PIED အပြည့်အစုံသို့ ဦး တည်သွားသည် (ဆိုလိုသည်မှာလူ၏လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုတကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအစားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ခြင်း) ။
SUMMARY: ညစ်ညမ်းသောလိင်မှုကိစ္စပြတ်လပ်မှုနှုန်း ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းကို Ley ကကြိုးစားခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုညစ်ညမ်းမှုကိုအမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေကြောင်းသက်သေပြရန်ကြိုးစားနေသည်။ Ley ဟာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြစ်ပါပဲ။
ဒေးဗစ် LEY: Case Western မှ Joshua Grubbs နှင့်ခရိုအေးရှားမှ Alexander Stulhofer ကဲ့သို့သောစာရေးဆရာများမှပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းသုတေသနပြုမှုများစွာသည်ကိုယ်ကျင့်တရား၏အခန်းကဏ္ and နှင့်ခိုင်မာမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ယာနျဘာသာတရားကို လိင်သို့မဟုတ် porn စွဲလမ်းအဖြစ်ဖော်ထုတ်သောသူတို့၏နောက်ခံ၌တည်၏။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ဤသုတေသီနှစ် ဦး စလုံးသည်လိင် / ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း (သို့) အခြားသူများထက်လိင်မှုကိစ္စပိုမိုကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြသခဲ့သည် - သူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး ပို၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်။
RESPONSE: အများကြီးလား အကိုးအကားမရှိသောကြောင့်ဖော်ပြထားသည့်လေ့လာမှုနှစ်ခုကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့။ Grubbs နှင့် Stulhofer တို့၏ဖြစ်ရပ်များတွင်လိင်၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အရှက်ရမှုနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းတို့အကြားအကျိုးဆက်များကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်မှုနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ ဒါကိုရှင်းပြလို့မရဘူး။ (တစ်နည်းပြောရရင်တော့သူတို့မှာမရှိဘူး။ )
(Stulhofer စက္ကူကဲ့သို့အမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အမျိုးသား Hypersexuality ၏အသှငျအပွငျရှိပါသလား? တစ်အွန်လိုင်းလေ့လာမှုကနေရလာဒ်) နိဂုံးချုပ်ပါတယ် says:
နမူနာ၏ကျန်, အလူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် hypersexuality အုပ်စုတစ်စု ဘာသာရေး၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ လိင်စိတ်ပျင်းလာမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအကျိုးဆက်များကိုကြုံတွေ့ရခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားကိုပိုမိုဆိုးရွားစွာအကဲဖြတ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအုပ်စုတစ်စု သာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆီသို့ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်သဘောထားများအစီရင်ခံထဲမှာထိန်းချုပ်မှုကနေကွဲပြားပါတယ်။
ပထမ ဦး စွာ Stulhofer က hypersexuality group (sex / porn စွဲသူများ) နှင့်မြင့်မားသော libido အုပ်စုအကြားတွင်အနည်းငယ်ထပ်နေသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း“ လိင်တူဆက်ဆံသူများ” သည်လိင်ဆန္ဒပြင်းပြရုံမျှဖြင့် Ley ၏ပြောဆိုချက်ကိုငြင်းဆန်သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်စွဲသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသဘောထားများရှိကြသည်။ စွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းအပေါ်မကောင်းဟုခံစားရခြင်းသည်အလွန်ထူးဆန်းပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထိန်းအချုပ်မဲ့အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပျက်သဘောဆောင်သောခံစားချက်မျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသလော။ လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ ကိုအပျက်သဘောဆောင်သောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍“ လူတစ် ဦး ၏လိင်ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရားကိုအကဲဖြတ်ခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ၎င်းသည်“ စွဲလမ်းသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုအပေါ်အပျက်သဘောခံစားချက်များကိုခံစားကြရသည်” ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
Grubbs သည် et alရလဒ်များအနေဖြင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများအားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်းယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းသည့်သတင်းအချက်အလက် (သို့မဟုတ်အချို့အခြေအနေများတွင်အလွန်အမင်းအသိပေးထားခြင်း) ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားတစိတ်တပိုင်းရှင်းပြနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့စွဲအကြောင်းကိုမေးသောအခါပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်း? ဘာသာရေးလူများသည်လည်းရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိကြသည်၊ ထို့ကြောင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုစိတ်ဆင်းရဲစေနိုင်ခြင်း (သို့) သူတို့၏မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုပိုမိုသိရှိနိုင်သည်။ ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးသမားမဟုတ်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစမ်းသပ်ရန်မစဉ်းစားကြပါ၊ သို့မှသာသူတို့သည်နံရံတစ်ခုသို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုဘဲပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ဘာသာတရားသည်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုယုံကြည်” ရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လျှင်ပြန်လည်နာလန်ထူရေးဖိုရမ်တွင်ပါဝင်သူအများစုသည်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ငါတို့မြင်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသောလူကြိုက်အများဆုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောသောညစ်ညမ်းသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်၊ r / nofap, သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနေရာ၌ရှိနေသော်လည်း (2012 ပြန်) ။ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင် 60 +% Non-ဘာသာရေးခဲ့ကြသည် (၂၃% ခရစ်ယာန်) ။ ထိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးမကြာမီတွင်“ ခရစ်ယာန် nofap” ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ r / nofap ရှိဘာသာရေးရာခိုင်နှုန်းသည်ယခုအချိန်အထိပင်နိမ့်သည်။ နောက်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး စစ်တမ်း၌တည်၏သာ 11% ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမအကြိမ်စစ်တမ်းကောက်ယူပြီးကတည်းက r / nofap တွင်အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်တိုးများလာသည်။ ယခုတွင်အဖွဲ့ဝင် ၁၇၀ ရှိပြီး + ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူအများစုဖြစ်သည်။
Grubbs သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းစနစ်လိုအပ်သည် - ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေသည့်စွဲလမ်းမှုကိုမဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောအရှက်ကွဲခြင်းကိုညစ်ညမ်းစေသောအကြောင်းအရာများမှပေါ်ပေါက်လာသောအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသောနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်။
တစ်ဦးစိတ်ပညာရှင်တစ်သမတ်တည်းတစ်ကိုယ်ပိုင်အကူအညီ Group မှတိုက်ခိုက်ကြရန်အဘို့အက Ethical လား?
Ley NoFap တစ်ဦးညစ်ညမ်း-ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်, တစ်နည်းနည်းနဲ့အန္တရာယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒီအပိုင်းအစခုနှစ်တွင်သူသည်မိမိဆက်လက် အဆိုပါ NoFap အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအသေရေဖျက်တိုက်ခိုက်မှုများ။ အကယ်၍ သူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်နှင့်ပတ်သက်သောသိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်များကိုသဘောမတူပါက (NoFap ၏အားထုတ်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်) သူသည်သုတေသီများကိုယ်တိုင်နှင့်အတူလိုက်လျောသင့်သည်၊ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုကူညီသည့်အသိုင်းအဝိုင်းသို့မသွားသင့်ပါ။ ဒါကကင်ဆာလူနာတွေကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့တူတယ်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှလူများပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသောလူများအား Ley ကတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းရုံသာမကအမေရိကန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ APA ရှိပါတယ် အားလုံးစိတ်ပညာရှင်များအတွက်5လမ်းညွှန်အခြေခံမူ နှင့် Ley ၏နာတာရှည် NoFap ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသည် ၅ ခုစလုံးကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိယာမ (က) အကျိုးခံစားခွင့် ၄.၀၅ နှင့်မစားရခြင်း (အပိုင်း၌)
…သူတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်စိတ်ပညာရှင်များသည်သူတို့နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံသူများနှင့်အခြားထိခိုက်နစ်နာသူများ၏သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။ …။ စိတ်ပညာရှင်များ၏သိပ္ပံနည်းကျနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်လုပ်ရပ်များသည်အခြားသူများ၏ဘ ၀ ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏သြဇာကိုအလွဲသုံးစားပြုနိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ဘဏ္financialာရေး၊ လူမှုရေး၊
နိယာမခ - သစ္စာရှိမှုနှင့်တာဝန်ယူမှု (အပိုင်း၌)
စိတ်ပညာရှင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်သိပ္ပံနည်းကျတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်၎င်းတို့လုပ်ကိုင်နေသောအသိုင်းအဝိုင်းများသို့သတိထားမိသည်။ စိတ်ပညာရှင်များသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြုအမူဆိုင်ရာစံနှုန်းများကိုလိုက်နာသည်၊ ၄ င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခန်းကဏ္ and များနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုရှင်းလင်းပြပြီး၊ သူတို့၏အပြုအမူအတွက်သင့်တော်သောတာ ၀ န်ကိုလက်ခံပြီးခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအကျိုးစီးပွားပconflictsိပက္ခများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း …
နိယာမကို C: သမာဓိ (အပိုင်း၌)
စိတ်ပညာရှင်စိတ်ပညာ၏သိပ္ပံ, သင်ကြားရေးနှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်တိကျမှန်ကန်မှု, ရိုးသားမှုနှင့်နျကနျကွောငျးမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားကြလော့။ ဤအလှုပ်ရှားမှုများစိတ်ပညာရှင်မှာတော့ခိုးယူခိုးသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှု, subterfuge သို့မဟုတ်အချက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမှားယွင်းစွာတင်ပြအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြဘူး။
နိယာမ: D: ပြည်သူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစား (အပိုင်း၌)
မူအရအီး: ဂုဏ်သိက္ခာ (အပိုင်း၌)
စိတ်ပညာရှင်ဟာဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ထိုက်တန်သမျှသောလူမျိုး၏, နှင့် privacy, လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းဖို့တစ်ဦးချင်းစီ၏အခွင့်အရေးကိုလေးစားပါတယ်။
ကော်မရှင်ဖွဲ့စစ်ဆေးရေးကိုထောက်ခံ #4: နောက်ဆုံးအနေနဲ့, ဒါဝိဒ်သည် Ley မှတဆင့်ပိုက်ဆံစေသည် ကျဲအိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသူသည်စွဲ-deniers '' သဘောတရားအရာမဆငျမခွမဆငျမခွလျစ်လျူရှုတော်မူသောစာအုပ်နှစ်အုပ် ((ထွက်သွား set ကိုအားပေးအားမြှောက်ဘယ်မှာ လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာလျစ်လျူရှု နှင့်အသစ်၏အရေးပါမှု compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder ရောဂါ ) ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဖြေရှာတဲ့ကို manual ထဲမှာ။ Ley porn သူ၏တဖက်သတ်အမြင်များ featuring ကသူ၏များစွာသောဆွေးနွေးပွဲများများအတွက်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ 2019 တင်ဆက်မှုများတွင် Ley ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထောကျပံ့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ပေါ်လာသော: အပြုသဘောဆောင်သောလိင်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ.